घर भित्रै बस्न हाम्लाई कस्ले छेक्दैछ ? - Tulsipur Khabar घर भित्रै बस्न हाम्लाई कस्ले छेक्दैछ ? - Tulsipur Khabar
घर भित्रै बस्न हाम्लाई कस्ले छेक्दैछ ?
बसन्त परियार, १४ चैत ।
विश्व नै कोरोना भाईरस (कोभिड १९) महामारीको चपेटामा छ । छिमिकी देश चिन बाट सुरु भई विश्वमा नै फैलिदा ५ लाख ३१ हजारभन्दा बढीलाई संक्रमित तुल्याएको र २४ हजार बढीको अकालमा ज्यान लिइसकेको छ । तर चिनमा नँया संक्रीमित भेटिन छाडेपनि अन्य देशहरुमा दैनिक रुपमा बढिरहेको छ । अहीले विश्वमा चिन भन्दा धेरै क्षति हुने देश इटाली बन्न पुग्यो ।
अमेरिका जस्तो क्षमता र प्रवृधिमा अग्रणी मुलुकमा समेत यो रोगका संक्रमितहरुमध्ये हालसम्म १८६८ जना मात्रै निको भएका छन् । समयमै सजगता नअपनाउदा मानविय क्षती हुन पुगेको हो । तर अहिले भने यसको रोकथामका लागि सबैतिर प्रयास भइराखेको छ । यसको रोकथाम गर्ने सबैभन्दा राम्रो प्रयास भनेको एक अर्कामा भौतिक सम्पर्क छुटाउनु रहेको विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
यसको उपाय नै ‘लकडाउन’ भएको हुदा अन्य देशले ागथु गरे । यता नेपाल सरकारले पनि चैत ११ गते देखि १८ गतेसम्मका लागि देश लकडाउन गर्ने निर्णय गरि गर्दै अघि बढ्यो । सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन भन्यो । सरकारले जारी गरेको आदेश आफ्नै लागि भएका कारण गम्भीरताका साथ लिन आग्रह गरिएको छ ।
सधै जसो व्यस्त देखिने देशका धेरै बाटो,नाकाहरु ,बजार शून्य जस्तै छन् । तर ग्रामीण भेगमा भने अटेरी गरेको पाईन्छ । भीडभाड नगर्नु्स् भन्दा पनि नागरिकहरूले भेटघाटमा समय बिताउन थालेको देखिन्छ । एक ठाउमा जम्मा भएर खान पिन गर्ने, मनोरञ्जन गर्नेहरुको कमि छैन । बजार क्षेत्र भन्दा बढि ग्रामीण भेगमा अन्य स्थानबाट आएको हु्दा त्यहा झनै बढि चहलपहल भएको हुदा घर भित्रै बस्न हाम्लाई कस्ले छेक्दैछ ? शाथी भाई संगको संगत किन छाडेका छैनौ ? यस्ले बढि जोखिम बढाएको छ ।
कोभिड १९ बाट हामि भन्दा ठुला देश रोईरहेको बेला हामि अझै सचेत हुन सकेका छैनौ । सरकारले गरेको निर्देशन अवज्ञा गर्दा हामिले ठुलो क्षती भोग्न नपर्ला भन्न सकीदैन । त्यसैले यतिवेला को छिमेकि ,को आफन्त भन्ने बेला होईन । आफु जहा छ त्यहि सुरक्षित हुने हो । समस्या आईपरेपछि पछुताउनुभन्दा पनि बेलैमा सोचेर सरकारले गरेको निर्देशन पुर्ण रुपमा पालाना गरि सुरक्षित रहनुपर्ने देखिन्छ ।
जोखिममा काम गर्नेको स्वास्थ्य परीक्षण गर
लकडाउनको पालना गर्ने कि कोरोना संक्रमित हुने ?
लिपुलेक : चीनको विश्वास गुमाउँदै नेपाल